ဘတ်စ်ကား | RayHaber | မီးရထားလမ်း အဝေးပြေး | ကေဘယ်လ်ကား
Bishkek မြို့စည်ပင်သာယာညီလာခံ EGO သို့အလည်အပတ်ခရီး; EGO အထွေထွေမန်နေဂျာ Nihat ALKAŞသည်ကာဂျစ္စတန်သမ္မတနိုင်ငံမြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကောင်စီ၏ဒုတိယမြို့တော်ဝန် Ruslanbek ZHAKYSHOV ဦး ဆောင်သည့်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အားလက်ခံတွေ့ဆုံသည်။ ဝန်ခံချက်အတွက်, EGO 77 ၏အထွေထွေညွှန်ကြားမှု [ပို ... ]
Başkan Aktaş Kahraman Şoförü Ödüllendirdi; Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, seyir halinde iken otobüste çıkan yangında soğukkanlılıkla tüm yolcuları sorunsuz bir şekilde tahliye edip, olası bir facianın önüne geçen [ပို ... ]
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren ve öğrenciler arasında ‘10 numara hat’ olarak bilinen hat 10’un seferlerine aralıksız devam ediliyor. Bir günde gidiş dönüş olmak üzere 59 sefer yapan 10 [ပို ... ]
Kadınlara pozitif ayrımcılık yapacağını her fırsatta dile getiren Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, uygulamalarıyla da bu sözünü hayata geçiriyor. Mersin’de toplu taşımada kadınlar söz sahibi oluyor. Geçtiğimiz günlerde araç [ပို ... ]
Van Büyükşehir Belediye Meclisi’nin almış olduğu kararla, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda belediye otobüsleri ücretsiz olacak. Van’da Cumhuriyetin kuruluşunun 96. yılında, kutlama ve etkinliklerine katılımı kolaylaştırmak amacıyla Büyükşehir Belediyesine ait otobüsler, [ပို ... ]
အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးယာဉ်များအားကိုယ်ကျင့်တရားပိုင်းဆိုင်ရာပံ့ပိုးမှုပေးရန်ဥဖရတ်အရှေ့ဘက်ရှိတူရကီစစ်တပ်သည် Antalya Metropolitan Municipality သည်တူရကီအလံကိုချိတ်ဆွဲထားသည်။ Metropolitan မြူနီစီပယ်၏လျှောက်လွှာAntalyalılarထံမှကျေးဇူးတင်ကြောင်းလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ [ပို ... ]
သြဂုတ်လအတွင်းရှိ5စမတ်ကောက်ကောက်စနစ်ကိုအသုံးပြုရန် ESHOT အားတင်ဒါခေါ်ယူခြင်းကိုကန့်ကွက်ခဲ့သည်။ တင်ဒါအောင်မြင်ခဲ့သည့် E-Kent ကုမ္ပဏီသည်ဒီဇင်ဘာလတွင်7ကိုစတင်လုပ်ကိုင်တော့မည် Sabah Ertan Gürcanerမှပြောကြားခဲ့သည်။ İzmirမြို့ပြမြူနီစီပယ်၌တည်၏ [ပို ... ]